true investigations /zu-ZA/tools-for-life/investigations/steps/investigation-and-its-use.html read 8 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/investigations_zu_ZA.jpg Uphenyo
8.‎1 FUNDA LENDATSHANA
Uphenyo olunembile luthembele kwi-Whys efanele. Ungaqonda u-Why wangempela kungani uma ubona lokhu: I-REAL WHY IVULA UMNYANGO (OHOLELA) EKUSINGATHENI.
Uma ubhala u-Why, buza lo mbuzo: “Ngabe lokhu kuvula iminyango yokusingathwa?” Ngabe kuholela noma kwenza kube khona ukusingatha?
Uma kungenjalo, khona ke kungu-Why ongalungile.
Lapho uno-Why olungile, ukusingatha lokhu okutholile kuba lula. Lapho ukhungatheka ngokwengeziwe uzama ukuthola umbono ohlakaniphe kakhulu futhi oqondayo wokusiza lesi simo, kungenzeka ukuthi ube no-Why ongalungile.
Ngakho ke uma ukusingathwa kwesimo kungabonakali kalula, khona-ke u-WHY AWUKAVULI UMNYANGO futhi kungenzeka akulungile.
U-Why olungile uvula umnyango wokwenza ngcono, unika amandla umuntu ukuthi akwazi ukusingatha okuyinto, uma yenziwe kahle, ezofeza indawo enhle. Ubuchwepheshe Bokuphenya bungasetshenziswa ezimweni ezinhle noma ezimbi, ezinkulu noma ezincane, ukuxazulula ama-puzzle amaingi empilo nokwenza izixazululo zangempela futhi zisebenzeke.